Ithegi: i-wordpress backup | Martech Zone
Ithegi: i-wordpress backup
Sizihambisa njani ngokwakho ukufakwa kweWindowsPress
NgoLwesihlanu, Agasti 8, 2014 NgoLwesihlanu, Agasti 8, 2014 Douglas Karr
Ungathanda ukucinga ukuba ukuhambisa indawo yakho yeWordPress ukusuka kwenye indawo yokubamba ukuya kwenye kulula ngokwenene, kodwa inokudandatheka ngokwenene. Ngokwenene sasinceda umthengi phezolo egqibe kwelokuba asuke kwenye inginginya aye kwenye kwaye ngokukhawuleza yajika yaba siseshoni yokusombulula ingxaki. Benze into abaqhele ukuyenza abantu-bayikhuphile yonke into, bathumela iziko ledatha, bayisa kwiserver entsha kwaye bangenisa iziko ledatha.
Xa Kusehla Intlekele!
Lwesine, Okthobha 27, 2011 NgoLwesibini, Januwari 29, 2013 Douglas Karr
Iiyure ezingama-48 zokugqibela khange zibe mnandi. Itekhnoloji yinto entle, kodwa ayikaze ifezeke. Xa kusilele, andiqinisekanga ukuba ngenene ulungiselelo oluninzi onokuba nalo… kodwa kufuneka usabele. Usenokuba uqaphele ukuba indawo yethu yayihamba kancinci kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo. Yayimangalisa into yokuba sinayo kwiphakheji enkulu yokubamba idityaniswe neseva yedatha kunye nenethiwekhi yokuhambisa umxholo.